Qeyb ka mid ah sirta dagaalka Jenaraal Khaliifa Xaftar oo la helay - BBC News Somali
Image caption Waa gantaallo ay qabteen ciidammada dowladda ay Qaramada Midoobay baritaarto
Wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa sheegay in gantaallada oo aan "la isticmaali" karin aan looga gol lahayn in la siiyo kooxaha Liibiya, isla markaana la rabay in la burburiyo.
"Hubkaasi waxaa lagu ilaalinayay xooggaga ku hawlan xog ururinta iyo ka hortagga argagixisada," ayaa lagu sheegay warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Faransiiska.
Waxa ay intaa ku dartay in gantaallada ay ahaayeen "kuwo hallaabay oo aan la adeegsan karin" isla markaana "si kumeelgaar aloo xareeyay ka hor inta aan la burburin".
Maamul si buuxdo gacanta ugu haya waddanka Liibiya ma uu jiro dalkuna ma degana, oo dagaal u dhaxeeya ururo siyaasadeed iyo kuwo milateri oo ay ugu muhiimsan yihiin dowladda ay Qaramada Midoobay baritaarto ee loo soo gaabiyo (GNA) ee uu hogaamiyo Ra'iisul wasaare Fayez Mustafa al-Sarraj, iyo Jenaraal Xaftar oo hogaamiya Xoogga Qaranka Liibiya ee loo soo gaabiyo (LNA).
Dhibaatada Liibiya: Dagaalka loogu jiro gacan ku haynta magaalada Tripoli muuqaalkan ayaa sharaxaya
Image caption Jaranayaal Khaliifa Xaftar waxa uu hogaamiyaa Xoogga Qaranka Liibiya ee loo soo gaabiyo (LNA)